ပြည်သူ့ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်မှုတွင် ကျဆုံးသွားခဲ့သော သူရဲကောင်းပြည်သူများအတွက် ရပ်ကွက်မိသားစုနဲ့စုပေါင်းကာ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ နေရဲနဲ့ သဇင်ထူးမြင့်တို့ မောင်နှမ(ရုပ်သံ) – Online News Post
ပြည်သူ့ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်မှုတွင် ကျဆုံးသွားခဲ့သော သူရဲကောင်းပြည်သူများအတွက် ရပ်ကွက်မိသားစုနဲ့စုပေါင်းကာ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ နေရဲနဲ့ သဇင်ထူးမြင့်တို့ မောင်နှမ(ရုပ်သံ)
အကယ်ဒမီ ခင်လှိုင် က တော့ သာယာ စိုပြေတဲ့ မိသားစု ဘဝ လေးကို တည်ဆောက် ထားပြီး သူ့ရဲ့ သားသမီးတွေ ကလည်း လိမ္မာ ရေးခြား ရှိကြ ပါတယ် နော် ။ခင်လှိုင်တို့ မိသားစု လေးက ဘယ်အရာ မဆို စည်းလုံး ကြပြီး ချစ်ချစ် ခင်ခင် ရှိကြလို့ အရမ်း အားကျဖို့ ကောင်းတဲ့ မိသားစု လေးဖြစ် ပါတယ် ။ခင်လှိုင်တို့ မိသားစုက တော့ လတ်တလော အခြေအနေ တွေမှာ ဆိုရင် တစ် မိသားစုလုံး လမ်းမပေါ် ထွက်ပြီး ပြည်သူ တွေနဲ့ အတူ ရပ်တည် နေတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ခင်လှိုင်တို့ မိသားစု က နေ့စဉ် ရက်ဆက် လမ်းပေါ် ထွက်ပြီး လူထု လှုပ်ရှားမှု တွေမှာ ရဲရင့်စွာ ပါဝင် ကြတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် နော် ။
ခင်လှိုင်တို့ အနုပညာရှင် အသိုင်း အဝိုင်း က တော့ လက်ရှိ အခြေအနေတွေ ကြောင့် အနုပညာ အလုပ်တွေ ကိုလည်း ခေတ္တ ရပ်နား ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခု လိုအချိန် မျိုးမှာ အနုပညာရှင် အသိုင်း အဝိုင်းက ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်း ရှိပြီး ကိုယ်ယုံ ကြည်ရာကို အတူတကွ လျှောက်လှမ်း နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် နော် ။သဇင်ထူးမြင့်တို့ မောင်နှမ တွေ က လည်း လူငယ် တွေ ပီပီ ရဲရင့် ပြတ်သားတဲ့ စိတ်ဓာတ် နဲ့ ရင်ဆိုင် နေကြတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သဇင်ထူးမြင့် တို့ မိသားစု က နေ့ ဘက်ဆို ရင် လမ်းမပေါ် ထွက်ပြီး လှုပ်ရှား သလို ညတိုင်းလည်း သံပုံးတီး ကြတာ ဖြစ်ပါ တယ် နော် ။
( ၂၈ . ၂ . ၂၀၂၁ ) ရက် နေ့ ၊ မနေ့က ဆိုရင် တော့ လူထု လှုပ်ရှား မှုမှာ အားကြိုး မာန်တက် ပါဝင် ကြတဲ့ ပြည်သူတွေထဲ ကမှတချို့ လူငယ်လေး တွေကျဆုံး သွား ခဲ့ ကြတာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ပြည်သူ လူထု ကလည်း ကျဆုံး သွားတဲ့ လူငယ် တွေ အတွက် တတ်နိုင် တဲ့ဘက်က နေရပ်တည်ကြ ပြီး အရမ်း ဝမ်းနည်း နေကြတာ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သဇင်ထူးမြင့်နဲ့ နေရဲတို့ မောင်နှမ က လည်း သူမတို့ နေထိုင်ရာ လမ်းထဲက အိမ်နီးနား ချင်း တွေနဲ့ စုပေါင်း ပြီး ဖယောင်းတိုင် တွေထွန်း ကာ ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ် ပေးခဲ့ကြ တာဖြစ် ပါ တယ် ။ အခုလို အချိန် မျိုးမှာ ရဲရင့်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အသက်ပေး သွားကြရတဲ့ လူငယ်တွေ အတွက် ပြည်သူလူထု က အရမ်းစိတ် မကောင်းဖြစ် နေကြ တာဖြစ်ပါ တယ် နော် ။
photo credit : Thazin Htoo Myint & Nay He ’ s facebook acc
source & video credit : Nay Ye ’ s facebook account
အကယ္ဒမီ ခင္လွိုင္ က ေတာ့ သာယာ စိုေျပတဲ့ မိသားစု ဘဝ ေလးကို တည္ေဆာက္ ထားၿပီး သူ႔ရဲ့ သားသမီးေတြ ကလည္း လိမၼာ ေရးျခား ရွိၾက ပါတယ္ ေနာ္ ။ခင္လွိုင္တို႔ မိသားစု ေလးက ဘယ္အရာ မဆို စည္းလုံး ၾကၿပီး ခ်စ္ခ်စ္ ခင္ခင္ ရွိၾကလို႔ အရမ္း အားက်ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ မိသားစု ေလးျဖစ္ ပါတယ္ ။ခင္လွိုင္တို႔ မိသားစုက ေတာ့ လတ္တေလာ အေျခအေန ေတြမွာ ဆိုရင္ တစ္ မိသားစုလုံး လမ္းမေပၚ ထြက္ၿပီး ျပည္သူ ေတြနဲ႔ အတူ ရပ္တည္ ေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ခင္လွိုင္တို႔ မိသားစု က ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ လမ္းေပၚ ထြက္ၿပီး လူထု လႈပ္ရွားမႈ ေတြမွာ ရဲရင့္စြာ ပါဝင္ ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္ ။
ခင္လွိုင္တို႔ အႏုပညာရွင္ အသိုင္း အဝိုင္း က ေတာ့ လက္ရွိ အေျခအေနေတြ ေၾကာင့္ အႏုပညာ အလုပ္ေတြ ကိုလည္း ေခတၱ ရပ္နား ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အခု လိုအခ်ိန္ မ်ိဳးမွာ အႏုပညာရွင္ အသိုင္း အဝိုင္းက ျပည္သူေတြနဲ႔ တစ္သားတည္း ရွိၿပီး ကိုယ္ယုံ ၾကည္ရာကို အတူတကြ ေလၽွာက္လွမ္း ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္ ။သဇင္ထူးျမင့္တို႔ ေမာင္ႏွမ ေတြ က လည္း လူငယ္ ေတြ ပီပီ ရဲရင့္ ျပတ္သားတဲ့ စိတ္ဓာတ္ နဲ႔ ရင္ဆိုင္ ေနၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သဇင္ထူးျမင့္ တို႔ မိသားစု က ေန႔ ဘက္ဆို ရင္ လမ္းမေပၚ ထြက္ၿပီး လႈပ္ရွား သလို ညတိုင္းလည္း သံပုံးတီး ၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္ ။
( ၂၈ . ၂ . ၂၀၂၁ ) ရက္ ေန႔ ၊ မေန႔က ဆိုရင္ ေတာ့ လူထု လႈပ္ရွား မႈမွာ အားႀကိဳး မာန္တက္ ပါဝင္ ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြထဲ ကမွတခ်ိဳ႕ လူငယ္ေလး ေတြက်ဆုံး သြား ခဲ့ ၾကတာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။ ျပည္သူ လူထု ကလည္း က်ဆုံး သြားတဲ့ လူငယ္ ေတြ အတြက္ တတ္နိုင္ တဲ့ဘက္က ေနရပ္တည္ၾက ၿပီး အရမ္း ဝမ္းနည္း ေနၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သဇင္ထူးျမင့္နဲ႔ ေနရဲတို႔ ေမာင္ႏွမ က လည္း သူမတို႔ ေနထိုင္ရာ လမ္းထဲက အိမ္နီးနား ခ်င္း ေတြနဲ႔ စုေပါင္း ၿပီး ဖေယာင္းတိုင္ ေတြထြန္း ကာ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ၾက တာျဖစ္ ပါ တယ္ ။ အခုလို အခ်ိန္ မ်ိဳးမွာ ရဲရင့္တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အသက္ေပး သြားၾကရတဲ့ လူငယ္ေတြ အတြက္ ျပည္သူလူထု က အရမ္းစိတ္ မေကာင္းျဖစ္ ေနၾက တာျဖစ္ပါ တယ္ ေနာ္ ။
Previous post သရဏဂုံ တင်ထား ပြီးပြီမို့ သေလဲဂရုမစိုက်ဘူး … ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုမှာ တစ်တပ် တအားဆက်လက် ပါဝင်မယ် လို့အပြတ် ပြောလိုက် တဲ့ အလင်းရောင်
Next post ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေတဲ့ လူထုကြီးကို ကာကွယ်ပေးရင်းမှ ကံကောင်းစွာနဲ့ အန္တရာယ်ကြားက လွတ်မြောက်လာတဲ့ အကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ တိုင်ရွန်